Evanjelista - Wikipedia
Evanjelista na Evanjelistra no iantsoana ireo olona nanoratra ny Filazantsara na Evanjely na Vaovao Mahafaly efatra (Matio, Marka, Lioka ary Joany na Jaona) ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly. Ny roa ihany no anisan'ny Apostoly roa ambin'ny folo: i Matio sy i Joany (na Jaona). I Marka sy i Lioka dia tsy isan'ny Apostoly roa ambin'ny folo. Ny teny hoe evanjelista dia midika hoe "olona mpampiely vaovao mahafaly" (grika: euangelion "vaovao tsara").
1 Ireo Evanjelista
1.4 Joany na Jaona
Ireo Evanjelista[hanova | hanova ny fango]
Mpamory hetra talohan'ny naha Apostoly azy i Matio. Isan'ireo Apostoly roa ambin'ny folo izy. Araka ny lovantsofina kristiana dia izy no nanoratra ny Filazantsara voalohany izay mitondra ny anarany. Tsy mitonon-tena ho nanoratra ny Filazantsara araka an'i Matio i Matio. Maro anefa ireo mpandalina momba ny Baiboly izay milaza fa olona maro no nanoratra.
Marka[hanova | hanova ny fango]
Mpanara-dia akaiky an'i Simona Petera sy an'i Paoly Apostoly i Marka fa tsy isan'ireo Apostoly roa ambin'ny folo lahy. Jaona Marka koa no fiantsoana azy. Ny lovantsofina kristiana dia milaza fa izy no nanoratra ny Filazantsara araka an'i Marka. Tsy mitonon-tena ho nanoratra ny Filazantsara faharoa nampitondraina ny anarany anefa i Marka.
Lioka[hanova | hanova ny fango]
Mpitsabo no asan'i Lioka. Araka ny lovantsofina kristiana dia izy no heverina ho nanoratra ny Filazantsara araka an'i Lioka izay nataony ho an'i Teofilo. Izy koa no heverina ho nanoratra ny Asan'ny Apostoly sady namana akaikin'i Paoly Apostoly.
I Joany evanjelista dia heverina araka ny lovantsofina ho ilay "mpianatra tian'i Jesoa indrindra", isan'ireo Apostoly roa ambin'ny folo, tsy voatonona anarana ao amin'ny Filazantsara araka an'i Jaona anefa izy amin'ny maha mpanoratra azy.
Heverina ho nanoratra ireo Epistily voalohany sy faharoa ary fahatelo mitondra ny anaran'i Joany koa izy. Betsaka anefa ireo mpikaroka momba ny Baiboly izay milaza fa olona samy hafa no nanoratra ny tsirairay amin'ireo boky ireo. Izy koa no heverina fa nanoratra ny Apokalypsin'i Jaona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Evanjelista&oldid=979713"
Voaova farany tamin'ny 17 Janoary 2020 amin'ny 04:22 ity pejy ity.